WAR CUSUB:- Shirkada DPWorld oo isugu yeertay xisbiyada Siyaasadda Somaliland – XAMAR POST
WAR CUSUB:- Shirkada DPWorld oo isugu yeertay xisbiyada Siyaasadda Somaliland
By Mohamed Ahmed On Sep 17, 2017
Sharikadda gacanta ku heysa maamulka Dekadda Magaalada Berbera ee DPWorld ayaa magaalada Dubai isugu yeertay xisbiyada Siyaasadda Maamulka Somaliland ku tartamaya.
Madaxda DPWorld ayaa walaac badan ka muujinaya sida ay u sii heyn karto maamulka Dekadda Berbera haddii laga guuleysto Xisbiga Kulmiye ee xukuumad isaga matasha saxiixday heshiiskaas.
Warqad casuumaad ah oo ay madaxda DPWorld Dubai uga soo direen Madaxda Xisbiyada Somaliland ayaa waxaa ajiibay Xisbiyada Kulmiye iyo Ucid waxaana iska diiday Xisbiga Waddani oo uu musharraxa u yahay C/Raxmaan Cirro.
Arrintan waxaa ay dhalatay kaddib markii DPworld ay shaki gelisay kalsoonida ay ku maamuli karto Dekadda Berbera haddii Xisbiga Kulmiye laga adkaado,waxaana ay taasi sababtay in la casuumo madaxda Xisbiyada maaddaaama Bisha November ay dhaceyso doorashad madaxdtinimada Somaliland oo ay ku hardamayaan saddexda Xisbi ee ka jira Somaliland.
Heshiiska ay DPworld kula wareegtay Dekadda Berbera ayaa waxaa si muran ku jiray ku meel mariyay Baarlamaanka Somaliland oo uu markaas guddoomiye u ahaa C/Raxmaan Cirro kaas oo laftiisa diiddanaa sida ay wax u dhaceen xilligaas.
Wafdi hor dhac u ah Ra’iisal Wasaare Kheyrre oo gaaray New York.
DAAWO SAWIRRO:- Madaxweynaha Jubbaland oo tagay halka Kenya ay ka dhisayso darbiga